एनआईसी एशिया बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, २१ भदौ २०७३)
२०७२/७३ आवको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ५७ दशमलव २९ प्रतिशत बढेको छ । बैङ्कले २६ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ३७ नगत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
मनबैत्ती चित्र : अन्तिम व्यापार दिनमा सामान्य डोजी आकृति बनेको छ । यसले बजारमा शेयरको विक्री र खरीद चाप सन्तुलित हुन खोजेको देखाउँछ । यसले बजार प्रवृत्ति रिभर्स हुने पनि सङ्केत गर्दछ । साताभरि ओरालो लागेको कम्पनीको शेयरमूल्य यसले आगामी दिनमा शेयर प्रवृत्ति बुलिश हुने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : न्युट्रल जोन (६६ दशमलव ६७ स्केल)मा छ । खरीद चाप बढेकोे छ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : २४ दशमलव ७५ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्यरेखा र ५० दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य २१ दिने औसत मूल्य रेखा, ट्रेण्ड लाइन र सातदिने औसत मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ८ सय ८५ मा टेवा पाउने सङ्केत देखिन्छ । मूल्य महँगिएमा रू. ९ सय ४ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।
- बैङ्कको चौथो त्रैमासमा नाफा ५७ प्रतिशत बढेको छ । गत आवमा रहेको रू. ३२ करोड ३२ लाख खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल हुनाले र खुद ब्याज आम्दानी २५ दशमलव ३२ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ५५ दशमलव ४१ प्रतिशत बढ्नाले खुद नाफा बढेको हो ।
- चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा १८ दशमलव ४१ प्रतिशतबाट बढेर २३ दशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको छ ।
- ब्याज आम्दानी १२ दशमलव ८५ प्रतिशत बढेर रू. ४ अर्ब ३२ करोड र ब्याज खर्च ४ दशमलव ४४ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।
- कर्मचारी खर्च ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, अन्य सञ्चालन खर्च ४ दशमलव ९० प्रतिशत र कुल सञ्चालन नाफा २ गुणाले बढेको छ ।
- बैङ्कले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रकम २ गुणा बढेर रू. ९४ लाख २८ हजार पुगेको छ ।
- पूँजीकोष लागत साढे ४ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १३ प्रतिशत रहेको छ ।
- बैङ्कको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात साढे २३ गुणा, प्रतिशेयर आम्दानी २८ दशमलव ४ र मूल्य आम्दानी अनुपात २८ गुणा छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे ४ गुणा छ ।